कति दर्शकले हेर्छन् क्रोएशिया र फ्रान्सबीचको फाइनल ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कति दर्शकले हेर्छन् क्रोएशिया र फ्रान्सबीचको फाइनल ?
प्रकाशित मिति: ३१ असार २०७५, आईतवार
एजेन्सी । रसियामा जारी फिफा विश्वकपअन्तर्गत आइतबार फाइनल खेल हुँदैछ । यसका लागि फ्रान्स र क्रोएशिया तयार छन् । आज हुने फाइनल खेल संसारभरका दुई सयभन्दा बढी देशमा एक अरब भन्दा बढीले हेर्ने सम्भावना छ । यसपटक फाइनल हेर्ने मामिलामा नयाँ रेकर्ड बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
ब्राजिलमा भएको विश्वकप म्याच ३.२ अरब मानिसले हेरेका थिए । जबकी अनलाइन र मोबाइल सेवामार्फत फाइनल हेर्नेको संख्या २८० मिलियनभन्दा बढी थियो । यसपटक विश्वकप फाइनल हुने हुने समयमा विंबलडन टेनिसको पुरुष एकल फाइनल पनि हुनेछ । यसले विश्वकपको दर्शक घटाउने आकंलन गरिएको छ ।
फ्रान्स र क्रोएशियाबीच हुने फाइनल खेल लुजिन्हकी स्टेडियममा खेलाइनेछ । जसको दर्शक क्षमता ७८ हजार छ । फाइनलअगावै टिकट सबै बिक्री भइसकेको छ ।
फाइनलसम्म क्रोएशियाको यात्रा नहुन सक्ने भन्दै अति कम क्रोएशियाली नागरिकले मात्र टिकट काटेका थिए । अनलाइन बुकिङ जनवरीमै बन्द भएको थियो । फिफाले अतिरिक्त टिकटको व्यवस्था त गरेको हुन्छ तर सार्वजनिक रुममा उपलब्ध गराउँदैन । अब क्रोएशियाली नागरिकले मैदान बाहिर बसेर म्याच हेर्नेछन् ।